I-Luxury 2 Bed/Bath Cottage eneTubhu yaBucala eshushu
Fumana ulonwabo lokwenyani kule ndlu ENTSHA yefama yanamhlanje enemixholo cottage enamagumbi amabini enkosi abucala kunye negumbi lokuhlambela elipheleleyo labucala! Le ndlu intle inendawo yomlilo yamatye enesilingi, ikhitshi eligcweleyo elineetafile zegranite, kunye nebhafu eshushu yabucala yabantu abane! Ikwabonisa ukufikelela kwipuli yokuqubha entle yangaphandle.
Ngamagumbi amabini okulala enkosi yabucala kunye negumbi lokuhlambela elipheleleyo labucala, linokubonelela ngendawo efanelekileyo ukusuka kwizibini ezifuna indawo yothando ukuya kwiintsapho ezinkulu ezijonge ukwabelana ngexesha elisemgangathweni. Le ndlu intle inendawo yomlilo yamatye enesilingi, iitafile zegranite, isiqithi esinendawo yokuhlala, itafile yegumbi lokutyela, kunye nebhafu eshushu yabucala yabantu abane! Le ndawo intle yokuhlala ikwanekhitshi eligcweleyo apho unokupheka khona kude kuse kwintliziyo yakho. Awufuni ukupheka? I-Cottage #9 ibekwe ngokulula kwimizuzu emi-5 ukusuka eBerlin, eyona ntliziyo yeLizwe lase-Amish enokuthenga okuhle, iisayithi ezintle, kunye neendawo zokutyela ezimnandi zama-Amish. Nje ukuba ubuye kusuku lwakho lokuhlola le ndawo, thatha idiphu kwidama eliqhelekileyo ekwabelwana ngalo kunye neengxangxasi okanye endaweni yoko uphumle kule yunithi yebhafu eshushu yabucala kwiveranda yayo ebukekayo. Igumbi lokulala ngalinye linebhedi yenkosi enelinen zodidi oluphezulu, igumbi lokuhlambela elincanyathiselwe ngokupheleleyo, kunye ne-TV yescreen esicaba. Sukulinda ukuze uziphathe wena kunye nabo basondeleyo kuwe, kwindawo yokubaleka emangalisayo kwiLizwe lama-Amish eOhio!
Ukufikelela kwikhabhinethi yakho kusetyenziswa ikhowudi yekhiphedi kunye nekhowudi eya kubonelelwa xa isiqinisekiso.